Diyaarad daawo u siday Isbitaalka Baladweyne oo soo gaaray Garoonka diyaaradaha Afar sano kaddib markii ugu horeysay
Waxaa maanta ka soo degtay Garoonka Diyaaradaha ee Magaalada Baladweyne diyaaradii ugu horreysay oo muddo afar sano ah kaddib dawo u sitay hay’adda MSF ee gacanta ku haysa isbitaalka guud ee magaalada gobolka Hiiraan.
Guddoomiyaha maamulka DKMG ah ee gobolka Hiiraan, Cabdifitaax Xassan Afrax iyo xubno ka tirsan maamulka oo ayaa kusoo dhaweeyay garoonka diyaarada daawa u siday hay’adda MSF, isagoo uga mahad-celiyay hay’adda MSF howsha baaxad leh oo ay u heyso bulshada ku dhaqan gobolka.
"Runtii waan uga mahad-celineynaa hay’adda MSF howsha baaxda leh oo ay u heyso bulshada gobollka Hiiraan, waxaan ku dhiirigalneynaa in horay u sii wadaan howsha caafimaad oo ay hayaan, wixii hadda ka danbeeynaya ma jirti doonto in wado ay hay’adda leedahay meelo kale laga dajiyo, si toos ah ayeey diyaaradu u iman karaan halkan," ayuu yiri guddoomiyaha gobolka Hiiraan.
Waxaa uu ka dalbaday guddoomiyaha hay’adda MSF in ay xoojiso tayada caafimaad ee isbitaalka, gaar ahaan marka la eego dhaqaatiirta oo u baahan yahay ayuu yiri in la soo kordhiyo, maadaama baahida caafimaad ee jirta tahay mid balaaran.
Madaxa hay’addaha Samafalka ee maamulka dowladda KMG Keynadiid Muumin Cali oo guddoonsiiyay maamulka isbitaalka dawada maanta soo gaartay ayaa sheegay in mudo dheer laga shaqeynayay sidii ay dawada ku soo gaari laheyd magaalada, isaga oo intaa raaciyay in wixii hadda ka danbeeyay diyaaradaha hay’addaha samafalka adeegsan karaa garoonka magaalada.
Maamulka Isbitaalka guud ee gobollka Hiiraan ayaa ka mahad celiyay dadaalka dheeraad ah ee lagu bixiyay sidii loo suurtagali lahaa in Isbitaalku helo dawo mudo dheer aan soo gaarin, waxaana ay sheegeen in tani wax weyn ka tari doonto socod siinta howlaha caafimaad ee isbitaalka.
"Hay’adda MSF dawo la’aan ma aheyn, laakiin dhibaatada ugu weyn waxa ay ka jirtay sidii lagu soo gaarsiin lahaa isbitaalka, laakiin waxaan hubaa in wal walkii arintaa naga heystay uu soo dhamaaday," ayuu yir Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ah madaxa isbitaalka.
Waxaa uu sheegay Dr Xassan in hay’adda MSF tahay hay’adda aan siyaasad shaqo ku laheyn kana shaqeysa oo kaliya arrimaha samafalka iyo sidii bulshada dhibaateysan gacan loo siin lahaa.
Diyaaradda u rarneyd hay’adda MSF ee maanta gaartay magaalada Baladweyn ayaa sida 1.2 tan oo Dawo, taaasoo wax weyn ka tari doonta soco siinta howlaha caafimaad ee isbitaalka gobollka, waxaana xusid in dhawaan dawo u rarneyd hay’adda oo ku jeeday magaalada Baladweyne lagula dagay degmada Buula-burte ee gobollka Hiiraan. Maxamuud Axmed Xasan